AB14: “Tsy tokony hieritreritra isika fa hamaha izay olantsika rehetra ny teknolojia” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2019 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, বাংলা, Deutsch, srpski, English
Niseho voalohany tao amin'ny El Diario , tamin'ny teny Espaniola ity lahatsoratra ity. Nanaovan'i Ellery Roberts Biddle fandikanteny.
Seza foana ho an'ireo tsy tonga tamin'ny #AB14. Sary avy amin'i Hisham Almiraat tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
” Tsy mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fahafahana manakiana ny fihetsiky ny governemantany ireo izay monina any amin'ny fiarahamonina tandrefana. Izany no zo tsy anananay any amin'ny firenenay. “
Izany no nahatonga an'i Walid Al-Saqaf, mpanorina ny Portal Yemen, nanomboka ny famelabelaran-kevitra momba ny sivana sy ny fanaraha-maso nomerika tany amin'ny Fihaonamben'ny Bilaogera Arabo #AB14 izay natao tamin'ny volana Janoary 2014 tao Amman.
Afisy miantso ny famotsorana an'i Alaa Abd El Fattah sy Bassel Safadi, mpandray anjara teo aloha tao amin'ny Fihaonamben'ny Bilaogera Arabo.
Niova tanteraka ny tontolon'ny politika tamin'ity hetsika ity nanomboka tamin'ny fivoriana farany tamin'ny volana Septambra 2011, raha nivory tao Tunis ny bilaogera sy mpikatroka avy any amin'ny firenena Arabo niaraka tamin'ny afisy izay nivaky hoe: “Tonga soa eto Tunis Afaka.” Nitohy ny sivana sy ny famoretana nanomboka tamin'io fotoana io. Nahatonga ny tetezamita sarotra tamin'ny tranga sasantsasany sy ny fifandonana mitam-piadiana tamin'ny hafa ny fanantenana miredareda tsapa tamin'ny fivoriana farany, vokatry ny fitroarana manoloana ny didy jadona tao amin'ny faritra, izay hitantsika mazava ao amin'ny sehatra an-tserasera ny tolona rehetra.
“Tsy maintsy atsahatra ny mieritreritra fa hamaha ny olantsika rehetra ny teknolojia,” hoy i Al-Saqaf . “Efa eto ny sivana, tsy ijerena fitaovana, ka aoka tsy ho jembin'izany isika fa hijery ny (vahaolana) maharitra.”
Nifantoka tamin'ny paikadin'ny fikarohana ny fiarovana amin'ny sivana sy ny fanaraha-maso ny fivoriana sy amin'ny fiarovana ny fifamatorana iombonana eo amin'ny toerana ahatsapana toa voasaratsaraka bebe kokoa hatrany isan'andro. Nahitana hafatra avy amin'ireo mpandray anjara tsirairay ny tetikasa an-tsary.
“Manara-maso ny governemanta izahay fa tsy ny mifanohitra amin'izany,” hafatra avy amin'ny bilaogera Maraokana Zineb Belmkaddem nandritra ny Fihaonamben'ny Bilaogera Arabo tany Amman. Saripikan'i Amer Sweidan, nahazoana alalana.
Tamin'ity taona ity (2014), tsapa manokana ny tsy fahatongavan'ny mpandray anjara roa tamin'ny fivoriana farany dia ilay bilaogera Ejypsiana Alaa Abd El Fattah sy ilay mpikirakira tranonkala Syriana, Bassel Safadi . Natokana ho azy ireo izay mpanao gazety sy mpikatroka notanana avy ao amin'ny faritra ny fivoriana. Nisy ny fanambarana niantso ny fanafahana an'i Razan Zaitouneh , mpiara-manorina ny Foiben'ny Fanadihadiana mikasika ny Fanitsakitsahana ny Zon'Olombelona ao Syria, vondrona iray izay manadihady ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​izay nalaina an-keriny tamin'ny volana Desambra tany Damaskosy.
Amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anay dia manana andraikitra izahay hiray hina amin'ireo mpikatroka manohana ny fahalalahana ary mampiharihary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Mitaky ny Firenena Mikambana sy ny firenena rehetra tafiditra ao amin'ny Fivorian'i Geneve faha II momba ny Fandriampahalemana any Afovoany Atsinanana izahay ato amin'ny AB14 mba hametraka rafitra hahazoana antoka ny famotsorana ireo gadran'ny fanehoan-kevitra sy ireo nalaina an-keriny tao Syria.
Tsy ireo ihany no olona tsy tonga. Nalefa niverina tany Torkia ilay mpikambana Syriana iray ao amin'ny tetikasa Enab Baladi, tetikasam-pampahalalam-baovao tsy miankina noforonina tamin'ny fiandohan'ny fitroarana tamin'ny volana Martsa 2011, taorian'ny ora roa nakana am-bavany azy tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Amman. Mpandray anjara Irakiana roa no samy tsy nomena visa avokoa. Mbola mitohy ny famerenana ny olon-tsotra tsy hivezivezy ao amin'ny firenena samihafa ao amin'ny faritra (tamin'ny fivoriana farany, tsy afaka niditra tao Tonizia ireo mpandray anjara Palestiniana), zava-misy izay mifanohitra amin'ny lazaina fa firaisakinam-paritra.
“Tsy manan-kambara aho, afa-tsy ny henatra mba hamaritana ny fomba hitantanan'ny fitondrana Arabo ny olom-pirenena any amin'ny firenena Arabo hafa, kanefa misy olona manana pasipaoro Tandrefana afaka mivezivezy tsy misy visa ao amin'ny faritra iray manontolo,” hoy i Abir Kopty raha nanoratra. Nampiany hoe: “Hiady hatrany izahay raha mbola tsy mbola voasaraky ny sisintany na fitondrana tsirefesimandidy manasaraka anay.”